I-laka - I-Airbnb
Inlăceni, Județul Harghita, i-Romania
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kinga
U-Kinga Ungumbungazi ovelele
Ukulungiswa kwendlu yeminyaka engu-150 kuyinselele ethokozisayo. Umgomo uwukugcina ubuciko bendabuko, kodwa ngesikhathi esifanayo ukunikeza ukunethezeka kwekhulu lama-21.Le ndlu enhle yamapulangwe ise-Énlaka, idolobhana laseTransylvanian, elizungezwe imvelo.
Izgalmas feladat a mai kor igényeire formálni egy 150 éves házat.Ukuphehla uthuli kwendala ukuze ingangeni emfashinini efiphalayo ye-glitter yepulasitiki, kodwa ingabambeki kakhulu esikhathini esidlule, i-kitschy nostalgia.
Indlu enkulu inamakamelo okulala amabili, igumbi lokugezela elilodwa elikhulu elinobhavu ozimele, ikhishi elihlome ngokuphelele elinendawo yokudlela, igumbi lokuphumula elincane kanye novulande omkhulu.Isakhiwo sihlala ngokukhululeka abantu abangu-6.
Egcekeni elifanayo, ngaphesheya kwendlu enkulu kunendlu yasehlobo, enekamelo elilodwa lokulala, indawo yokulala, nendlu yokugezela.E-summerhouse ingalingana abantu abangu-2-3.
Zonke lezi zindlu zombili zinamakamelo okulala amathathu, lapho zingangena kalula abantu abayisishiyagalombili.
Egcekeni kukhona uhhavini wezitini kanye ne-grill, umthombo omdala, umgodi wesihlabathi, indawo yokucima umlilo, uvulandi omkhulu omboziwe onetafula elide, izihlalo, nama-hammocks.
I-chalet eyakhiwe ngamatshe inamakamelo amabili, igumbi lokugezela elikhulu elinebhavu lamahhala, ikhishi elihlome ngokuphelele, indawo yokudlela, indawo yokugezela encane kanye nompheme omkhulu.Le ndlu ikwazi ukuhlalisa abantu abayisithupha ngokukhululeka.
Egcekeni elifanayo, elibhekene nendlu, kukhona ikhishi lasehlobo lokuhlala elinekamelo, igalari yokulala, nendlu yokugezela.Indlu encane ingakwazi ukuhlalisa abantu abangu-2-3 ngaphezulu.
Lezi zindlu ezimbili zinamakamelo amathathu esewonke angakwazi ukuhlalisa abantu abayisishiyagalombili ngokukhululeka.
Ihhavini eliyibhamuza, indawo yokosa inyama, indawo yokucima ukoma, indawo yokosa umlilo yenza ukuhlala kube mnandi kakhulu, kanye nefilagoria ethokomele lapho ungadla khona, ukhulume futhi uphumule.
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 usofa, Omatolasi abangu-1
I-Énlaka itholakala ku-25 km ukusuka eSzékelyudvarhely, kanye ne-18 km ukusuka eKeresztúr. Idolobhana liyindawo enokuthula, enomlingo lapho ungakhohlwa khona ngenqubo yansuku zonke.Yeka umjaho wamagundane izinsuku ezimbalwa, wamukele imvelo, thatha uhambo olude, funda kuvulandi, phefumula umoya ohlanzekile, thola impilo yendabuko yasemakhaya.Ngifisa ukuthi uchithe isikhathi esithile sekhwalithi kule ndlu endala, futhi uthole umthombo omkhulu wokukhuthaza impilo ejabulisayo. Zizwe usekhaya!
UKinga Ungumbungazi ovelele